I-Google Street View Curiosity - Geofumed
Ngo-Okthobha, 2011 Google umhlaba / imephu, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
I-9 Amehlo isayithi eqokelele imifanekiso yesaziso ukusuka kwiGoogle Earth, ngokukodwa ngokubukwa kwesitalato (I-Street View).
Kumele uthathe ixesha lokukhangela izinto ezifana nalezi, kodwa hamba ukuba abanye bayibhale ingqalelo. Ngokuqhelekileyo izifundo zenzalo zala madoda zizilwanyana phambi kwekhamera, amantombazana "ahambe" kumacandelo okanye ezindleleni, izingozi, abantu abonisa isisu kunye nemiphumela engaqhelekanga kwilensi.
Nangona kukho ezinye iindawo ezinikezelayo curiosity ngendlela ehlelekile, Ii-9 Amehlo analo kwiphepha elilodwa kwaye engenazo nkcazo, njengokungathi ukushiya kwi-imagination. Ukubonisa amaqhosha ambalwa:
Oku kubonakala ngathi i-UFO ngokubanzi.
Le ndoda inokwenza izinto ezintathu: Ukukhonza umfazi we-Pentecostal-style, ukumnceda ngenkathi ehlanza okanye embulala. Kuzo zonke iimeko, intombi ehluphekileyo.
Khangela le mpembelelo engathandekiyo, njengokungathi into ekhona emoyeni kwaye yafakwa yinkhamera.
Indlu efana neyentombazana yam icela i-13 kwiminyaka edlulileyo. Ndimnike imeko ukuba ukuba undifumanise isibhamu kwi-Street View eyakhele yona, okwangoku uhamba eFransi ngenxa yokuba ufunga ukuba ukhona.
Kuzo zininzi imifanekiso. Ingikhumbuza isifundo esenziwe ekudlulisweni kwezifo zenyama ezivela eMexico ukuya ePanama ngokusekelwe kwisiko labashayeli bamaloli.
Hayi, oku kwenza ukuba i-tube ipake.
Yaye le njengaye yaphazamisa ngumoya, kuba akukho zibonakaliso zento awayeyichukumisayo kwaye kufuneka ukuba yomelele kangangokuba isisu sayo sibuhlungu njengoko kubonakala ngakwesokudla.
Ukubona ngaphezulu, kufuneka uhambe:
Post edlulileyo«Edlulileyo Ifomathi entsha ye-InfoGEO kunye ne-InfoGNSS kumagazini
Post Next KubaPhandi, iProjekthi yokuThuthwa kweeMpahlaOkulandelayo "
Izimpendulo ze-2 kwi "Google Street View Curiosities"
Hehe Yintoni eya kuhlala isasazeke emhlabeni jikelele yindawo yokugcina iGoogle Earth.
"Indlu" yibhotwe lobuGcisa eValencia, eSpain, eyilwe nguCalatrava kwaye lihamba neBhotwe lezeNzululwazi kunye ne-Oceanographic.
Yiya ukutsala i-checkbook, 😛